Healthy Breakfast - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကနျြးမာရေးနှငျ့ ညီညှတျသော မနကျစာ
မနကျစာကတော့ ဟုတျပါပွီ။ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျသောဆိုတာက ဘာလဲ။ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျသောကို ဘယျလို အဓိပ်ပါယျဖှငျ့မလဲ။ ဘယျလိုအခကျြတှနေဲ့ ကိုကျညီရငျ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတယျလို့ ဆိုမလဲ။
ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့အစညျးကွီးကတော့ ကနျြးမာတယျဆိုတာကို လှလှလေး အဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆိုထားပါတယျ။ ရောဂါဘယတှေ ကငျးဝေးနရေုံသာမက ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာနဲ့တကှ လူမှုဆကျဆံရေးပါ အဆငျပွခြေောမှေ့ ကနျြးမာနတောကို ကနျြးမာတယျလို့ ချေါပါတယျတဲ့။
သူ့အတိုငျးဆိုရငျ ရောဂါဘယကငျးဝေးစတေယျ၊ ရောဂါဘယတှကေို ကာကှယျတယျ၊ ခန်ဓာကိုယျကို ခှနျအားဖွဈစတေယျ၊ စိတျကို ပြျောရှငျစတေယျ၊ ခဈြရတဲ့သူတှနေဲ့ ပြျောပြျောရှငျရှငျ စားသုံးနိုငျတယျဆိုရငျ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ မနကျစာပေါ့။ အဲ့ဒီ့ထဲမှာမှ အာဟာရဆရာဝနျတဈယောကျအနနေဲ့ အာဟာရနဲ့သကျဆိုငျတာလေးတှကေို အလေးပေး ကောကျနှုတျပွောပွခငျြပါတယျ။
ရောဂါဘယတှကေို ကာကှယျပွီး ခန်ဓာကိုယျကို ခှနျအားဖွဈစတေဲ့ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ မနကျစာ ဖွဈဖို့အတှကျဆိုရငျ…….
၂) အာဟာရ စုံလငျမြှတစှာ ပါဝငျရပါမယျ
၃) ဆိုးဆေး၊ ဓါတုဆေးတှနေဲ့ တာရှညျခံအောငျ ပွုလုပျထားတဲ့ အစားအစာမြိုး မဟုတျဘဲ သဘာဝအစားအစာ ဖွဈရပါမယျ
ဒါကတော့ လူတိုငျးအတှကျ လိုအပျတဲ့ အခကျြသုံးခကျြပေါ့နျော။ အဲ့ဒီ့မှာမှ ကိုယျက ဝိတျခနြတေဲ့သူ သို့မဟုတျ ဆီးခြိုရောဂါရှိတဲ့သူ သို့မဟုတျ သှေးတိုးရောဂါရှိတဲ့သူ ဒါမှမဟုတျ အခွားရောဂါတဈမြိုးမြိုး ရှိတဲ့သူဆိုရငျတော့ ဒီ့ထကျပိုတဲ့ အခကျြလေးတှေ ပါဝငျမှာပေါ့။
အခုကတော့ သာမနျလူတဈယောကျအတှကျ ဘယျလိုအစားအစာတှကေ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတယျ၊ ဒါမှမဟုတျ ကနျြးမာရေးနဲ့ ပိုညီညှတျအောငျ ဘယျလို ရှေးခယျြ ပွုပွငျပွီး စားသငျ့တယျဆိုတာကို ဥပမာလေးတှနေဲ့ ခှဲခွမျးစိတျဖွာပွီး ပွောပွခငျြပါတယျ။
ဥပမာ (၁) ထမငျးဆီဆမျး(စားတျောပဲပွုတျ) + ကွကျဥကွျော
သိပျကို အရသာရှိပွီး ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ မနကျစာပါ။ စားတျောပဲနဲ့ ကွကျဥကနေ အသားဓါတျတှေ ကွှယျဝစှာ ရနိုငျပါတယျ။ သုံးတဲ့ဆီကတော့ တိရစ်ဆာနျအဆီ၊ ပွနျကွျောဆီတှေ မဟုတျဘဲ မပွညျ့ဝဆီတှေ ပိုမိုပါဝငျတဲ့ ပဲဆီစဈစဈ ဖွဈပါစေ။ ဆီကို အမြားကွီး မဟုတျဘဲ သငျ့တငျ့မြှတရုံဆမျးပါ။ ကွကျဥကိုလညျး ဆီနညျးနညျး ဆားနညျးနညျးနဲ့ ကွျောပါ။ ဆီးခြိုဝဒေနာရှငျတှကေတော့ ထမငျးကို သငျ့တျောတဲ့ ပမာဏပဲ စားပါ။
ဥပမာ (၂) ပေါငျမုနျ့
ပေါငျမုနျ့အဖွူအစား ဂြုံကွမျးပေါငျမုနျ့ကို ရှေးခယျြပါ။ သှေးထဲမှာ ပြျောဝငျနိုငျတဲ့ အမြှငျဓါတျတှပေါလို့ သှေးတှငျးသကွားဓါတျနဲ့ အဆီဓါတျကို ထိနျးညှိပေးပါတယျ။ ပေါငျမုနျ့ခညျြးပဲ စားမယျ့အစား အသားဓါတျရော ဗီတာမငျတှပေါ ရအောငျ ကွကျဥကွျောလေးနဲ့ဖွဈဖွဈ၊ တူနာငါးလေးနဲ့ဖွဈဖွဈ အသီးအရှကျလေးတှေ ထညျ့ပွီး sandwich လုပျစားပါ။ ကွကျအူခြောငျးတှေ၊ ဝကျအူခြောငျးတှနေဲ့ မစားပါနဲ့။
ဥပမာ (၃) ထမငျးကွမျး
ဗမာဆနျသူမြားကတော့ မနကျစာကို ထမငျးကွမျးပဲ ခုံခုံမငျမငျ စားကွတယျ။ ဒါဆိုရငျတော့ ထမငျး၊ အသားနဲ့ အသီးအရှကျကို မြှတစှာ ပါဝငျအောငျ စားပါ။
ဥပမာ (၄) ကောကျညှငျးပေါငျးနဲ့ အကွျောစုံ
နှမျးထောငျးတှေ အမြားကွီး စားရငျတော့ သှေးတိုးမယျ။ ဆီးခြိုသမားတှေ ကောကျညှငျးအမြားကွီး စားဖို့ မသငျ့တျောဘူး။ ဖွဈနိုငျရငျ အကွျောက အိမျမှာပဲ ဆီသနျ့သနျ့လေးနဲ့ ကွျောတာ ပိုကောငျးတယျ။ သှေးတိုးရှိရငျတော့ ငါးခွောကျဖုတျနဲ့ တှဲမစားသငျ့ဘူး။ စားတျောပဲပွုတျလေးနဲ့ စားရငျတော့ အသငျ့တျောဆုံးပါပဲရှငျ။
ဥပမာ (၅) ပလာတာ၊ အီကွာကှေး၊ စမူဆာ၊ နံပွား၊ တိုရှညျ ဘာညာ သာရကာ
ဆိုငျမှာ စားရတာ ဖွဈတဲ့အတှကျ ဆီသနျ့တဲ့ဆိုငျ သနျ့ရှငျးတဲ့ဆိုငျကို ရှေးခယျြပါ။ ဆီထဲစိမျပွီး ကွျောရတာထကျ ဆီနညျးနညျးနဲ့လုပျရတဲ့ နံပွား၊ တိုရှညျစတာတှကေို ဦးစားပေး ရှေးခယျြပါ။ ဆီကွျောတှေ စားဖွဈရငျ tissue လေးနဲ့ ပတျပွီး ဆီစုပျလိုကျပါ။
ဥပမာ (၆) ခေါကျဆှဲပါဝငျသော အစားအစာမြား
ခေါကျဆှဲသုပျ၊ နနျးကွီးသုပျ၊ မွီးရှညျ စတာတှေ စားဖွဈတဲ့အခါ ဆိုငျကို စမှာကတညျးက ဆီလြှော့ဖို့၊ အငနျလြှော့ဖို့၊ ပဲမှုနျ့လြှော့ဖို့ (ပဲမှုနျ့မြားရငျလညျး ဆီအမြားကွီး ဝငျသှားတတျတယျ) ပွောပါ။ မုနျ့ဟငျးခါး၊ အုနျးနို့ခေါကျဆှဲဆိုရငျတော့ အကွျောနဲ့ စားမယျ့အစား ပိုပွီး အာဟာရရှိအောငျ ဘဲဥ၊ ငါးဖယျတို့နဲ့ စားပါ။
ဥပမာ (၇) ကျောဖီနဲ့ လကျဖကျရညျ
ပွညျ့ဝဆီတှေ အသှငျပွောငျးဆီတှေ ပါတဲ့အတှကျ ဖွဈနိုငျရငျ ကျောဖီမဈ မသောကျစခေငျြပါဘူး၊ ကျောဖီမိတျ မသုံးစခေငျြပါဘူး။ ကျောဖီစဈစဈကို အဆီထုတျထားတဲ့ နှားနို့နဲ့ သကွားလေး လိုအပျသလို ထညျ့ပွီး သောကျတာ အကောငျးဆုံးပါ။ လကျဖကျရညျဆိုရငျလညျး နို့ဆီတှေ သကွားတှေ အမြားကွီးပါတဲ့ ခြိုအီနတောမြိုးကို မသောကျဘဲ ခပျဖနျဖနျ၊ ခပျစိမျ့စိမျ့ သောကျပါ။ ဖွဈနိုငျရငျတော့ အိမျမှာပဲ နှားနို့စဈစဈလေးနဲ့ သကွားလေးနဲ့ ကိုယျတိုငျ ဖြျောသောကျတာ အကောငျးဆုံးပေါ့ရှငျ။
နံနကျခငျး စားစရာတှေ အမြားကွီးကို ရေးရရငျ စာက အတျောရှညျမှာမို့လို့ ဒီလောကျနဲ့ပဲ ရပျပါရစေ။ ကိုယျစားတတျတဲ့ မနကျစာလေးတှကေို
ဘယျလို ပိုကောငျးအောငျ ပွုပွငျပွီး စားသငျ့တယျဆိုတာ သိခငျြရငျ comment ကနေ မေးလို့ရပါတယျ။
ကနျြးမာသော၊ အာဟာရဖွဈသော၊ ပြျောရှငျသော နံနကျစာစားခြိနျမြားကို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ။
ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော မနက်စာ
မနက်စာကတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်သောဆိုတာက ဘာလဲ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်သောကို ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်မလဲ။ ဘယ်လိုအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တယ်လို့ ဆိုမလဲ။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးကတော့ ကျန်းမာတယ်ဆိုတာကို လှလှလေး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ ရောဂါဘယတွေ ကင်းဝေးနေရုံသာမက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့တကွ လူမှုဆက်ဆံရေးပါ အဆင်ပြေချောမွေ့ ကျန်းမာနေတာကို ကျန်းမာတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်တဲ့။
သူ့အတိုင်းဆိုရင် ရောဂါဘယကင်းဝေးစေတယ်၊ ရောဂါဘယတွေကို ကာကွယ်တယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို ခွန်အားဖြစ်စေတယ်၊ စိတ်ကို ပျော်ရွှင်စေတယ်၊ ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စားသုံးနိုင်တယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ မနက်စာပေါ့။ အဲ့ဒီ့ထဲမှာမှ အာဟာရဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အာဟာရနဲ့သက်ဆိုင်တာလေးတွေကို အလေးပေး ကောက်နှုတ်ပြောပြချင်ပါတယ်။
ရောဂါဘယတွေကို ကာကွယ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ မနက်စာ ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်…….
၂) အာဟာရ စုံလင်မျှတစွာ ပါဝင်ရပါမယ်
၃) ဆိုးဆေး၊ ဓါတုဆေးတွေနဲ့ တာရှည်ခံအောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ အစားအစာမျိုး မဟုတ်ဘဲ သဘာဝအစားအစာ ဖြစ်ရပါမယ်
ဒါကတော့ လူတိုင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ အချက်သုံးချက်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒီ့မှာမှ ကိုယ်က ဝိတ်ချနေတဲ့သူ သို့မဟုတ် ဆီးချိုရောဂါရှိတဲ့သူ သို့မဟုတ် သွေးတိုးရောဂါရှိတဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် အခြားရောဂါတစ်မျိုးမျိုး ရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့ ဒီ့ထက်ပိုတဲ့ အချက်လေးတွေ ပါဝင်မှာပေါ့။
အခုကတော့ သာမန်လူတစ်ယောက်အတွက် ဘယ်လိုအစားအစာတွေက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ကျန်းမာရေးနဲ့ ပိုညီညွတ်အောင် ဘယ်လို ရွေးချယ် ပြုပြင်ပြီး စားသင့်တယ်ဆိုတာကို ဥပမာလေးတွေနဲ့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ပြောပြချင်ပါတယ်။
ဥပမာ (၁) ထမင်းဆီဆမ်း(စားတော်ပဲပြုတ်) + ကြက်ဥကြော်
သိပ်ကို အရသာရှိပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ မနက်စာပါ။ စားတော်ပဲနဲ့ ကြက်ဥကနေ အသားဓါတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာ ရနိုင်ပါတယ်။ သုံးတဲ့ဆီကတော့ တိရစ္ဆာန်အဆီ၊ ပြန်ကြော်ဆီတွေ မဟုတ်ဘဲ မပြည့်ဝဆီတွေ ပိုမိုပါဝင်တဲ့ ပဲဆီစစ်စစ် ဖြစ်ပါစေ။ ဆီကို အများကြီး မဟုတ်ဘဲ သင့်တင့်မျှတရုံဆမ်းပါ။ ကြက်ဥကိုလည်း ဆီနည်းနည်း ဆားနည်းနည်းနဲ့ ကြော်ပါ။ ဆီးချိုဝေဒနာရှင်တွေကတော့ ထမင်းကို သင့်တော်တဲ့ ပမာဏပဲ စားပါ။
ဥပမာ (၂) ပေါင်မုန့်
ပေါင်မုန့်အဖြူအစား ဂျုံကြမ်းပေါင်မုန့်ကို ရွေးချယ်ပါ။ သွေးထဲမှာ ပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ အမျှင်ဓါတ်တွေပါလို့ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်နဲ့ အဆီဓါတ်ကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ ပေါင်မုန့်ချည်းပဲ စားမယ့်အစား အသားဓါတ်ရော ဗီတာမင်တွေပါ ရအောင် ကြက်ဥကြော်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ တူနာငါးလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အသီးအရွက်လေးတွေ ထည့်ပြီး sandwich လုပ်စားပါ။ ကြက်အူချောင်းတွေ၊ ဝက်အူချောင်းတွေနဲ့ မစားပါနဲ့။
ဥပမာ (၃) ထမင်းကြမ်း
ဗမာဆန်သူများကတော့ မနက်စာကို ထမင်းကြမ်းပဲ ခုံခုံမင်မင် စားကြတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ထမင်း၊ အသားနဲ့ အသီးအရွက်ကို မျှတစွာ ပါဝင်အောင် စားပါ။
ဥပမာ (၄) ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့ အကြော်စုံ
နှမ်းထောင်းတွေ အများကြီး စားရင်တော့ သွေးတိုးမယ်။ ဆီးချိုသမားတွေ ကောက်ညှင်းအများကြီး စားဖို့ မသင့်တော်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် အကြော်က အိမ်မှာပဲ ဆီသန့်သန့်လေးနဲ့ ကြော်တာ ပိုကောင်းတယ်။ သွေးတိုးရှိရင်တော့ ငါးခြောက်ဖုတ်နဲ့ တွဲမစားသင့်ဘူး။ စားတော်ပဲပြုတ်လေးနဲ့ စားရင်တော့ အသင့်တော်ဆုံးပါပဲရှင်။
ဥပမာ (၅) ပလာတာ၊ အီကြာကွေး၊ စမူဆာ၊ နံပြား၊ တိုရှည် ဘာညာ သာရကာ
ဆိုင်မှာ စားရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆီသန့်တဲ့ဆိုင် သန့်ရှင်းတဲ့ဆိုင်ကို ရွေးချယ်ပါ။ ဆီထဲစိမ်ပြီး ကြော်ရတာထက် ဆီနည်းနည်းနဲ့လုပ်ရတဲ့ နံပြား၊ တိုရှည်စတာတွေကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ပါ။ ဆီကြော်တွေ စားဖြစ်ရင် tissue လေးနဲ့ ပတ်ပြီး ဆီစုပ်လိုက်ပါ။
ဥပမာ (၆) ခေါက်ဆွဲပါဝင်သော အစားအစာများ
ခေါက်ဆွဲသုပ်၊ နန်းကြီးသုပ်၊ မြီးရှည် စတာတွေ စားဖြစ်တဲ့အခါ ဆိုင်ကို စမှာကတည်းက ဆီလျှော့ဖို့၊ အငန်လျှော့ဖို့၊ ပဲမှုန့်လျှော့ဖို့ (ပဲမှုန့်များရင်လည်း ဆီအများကြီး ဝင်သွားတတ်တယ်) ပြောပါ။ မုန့်ဟင်းခါး၊ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲဆိုရင်တော့ အကြော်နဲ့ စားမယ့်အစား ပိုပြီး အာဟာရရှိအောင် ဘဲဥ၊ ငါးဖယ်တို့နဲ့ စားပါ။
ဥပမာ (၇) ကော်ဖီနဲ့ လက်ဖက်ရည်
ပြည့်ဝဆီတွေ အသွင်ပြောင်းဆီတွေ ပါတဲ့အတွက် ဖြစ်နိုင်ရင် ကော်ဖီမစ် မသောက်စေချင်ပါဘူး၊ ကော်ဖီမိတ် မသုံးစေချင်ပါဘူး။ ကော်ဖီစစ်စစ်ကို အဆီထုတ်ထားတဲ့ နွားနို့နဲ့ သကြားလေး လိုအပ်သလို ထည့်ပြီး သောက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုရင်လည်း နို့ဆီတွေ သကြားတွေ အများကြီးပါတဲ့ ချိုအီနေတာမျိုးကို မသောက်ဘဲ ခပ်ဖန်ဖန်၊ ခပ်စိမ့်စိမ့် သောက်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အိမ်မှာပဲ နွားနို့စစ်စစ်လေးနဲ့ သကြားလေးနဲ့ ကိုယ်တိုင် ဖျော်သောက်တာ အကောင်းဆုံးပေါ့ရှင်။
နံနက်ခင်း စားစရာတွေ အများကြီးကို ရေးရရင် စာက အတော်ရှည်မှာမို့လို့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်ပါရစေ။ ကိုယ်စားတတ်တဲ့ မနက်စာလေးတွေကို
ဘယ်လို ပိုကောင်းအောင် ပြုပြင်ပြီး စားသင့်တယ်ဆိုတာ သိချင်ရင် comment ကနေ မေးလို့ရပါတယ်။
ကျန်းမာသော၊ အာဟာရဖြစ်သော၊ ပျော်ရွှင်သော နံနက်စာစားချိန်များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
Cataplexy Part (2)